अष्टाङ्ग मार्गः बुद्धले दिएको सफलताको सूत्र पहिलो सूत्र-सम्यक दृष्टि - Nepal Buddhist News
अष्टाङ्ग मार्गः बुद्धले दिएको सफलताको सूत्र पहिलो सूत्र-सम्यक दृष्टि
जुन 25, 2021 जुन 25, 2021 rinpoche
बुद्धले दिएको दुःखमुक्तिका आठ सूत्रमध्ये पहिलो सूत्र हो — सम्यक दृष्टि अर्थात ठीक हेराइ । दृष्टि भन्ने कुरा यति महत्त्वपूर्ण छ कि हाम्रा सोचाइ, विचार, कार्यहरू दृष्टिले नै निर्धारण गर्छ । भनिन्छ पनि, ‘जस्तो दृष्टि त्यस्तै सृष्टि ।’ हो पनि, किन भने—
हेराइ (दृष्टि) अनुसार बुझाइ बन्छ ।
बुझाइ अनुसार सोचाइ बन्छ ।
सोचाइ अनुसार गराइ हुन्छ ।
गराइ अनुसार भोगाइ निश्चित हुन्छ ।
सम्यक दृष्टिलाई अँग्रेजीमा तीन किसिमले अनुवाद गरिएका छन् ।
‑ Right View/Perspective (ठीक दृष्टिकोण वा ठीक हेराइ)
‑ Right Vision (ठीक दूरदृष्टि)
‑ Right Understanding (ठीक बुझाइ)
त्यस्तै ‘सम्यक’को पनि धेरै अर्थ लाग्छ — ठीक, उचित, असल । संस्कृत शव्द व्यापक हुने भएकोले संस्कृतको एउटा शव्द बुझाउन पनि अँग्रेजीका धेरै शव्द प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले ‘दृष्टि’ शव्द बुझ्न अँग्रजीका तीनै अर्थ मिलाएर समग्रमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
ठीक दृष्टिकोण भन्नाले जीवन र जीवनमा आइपर्ने घटनाहरूलाई हामी कसरी हेर्छौं भन्ने हो । यदि हेराइ नै गलत भयो भने हाम्रो बुझाइ पनि गलत हुन्छ । गलत बुझाइले गलत सोचाइ पैदा हुन्छ । त्यसले समस्याको समाधान गर्नुको साटो दुःखमाथि दुःख थप्ने काम गर्छ ।
ठीक दूरदृष्टि भन्नाले राम्रो भविष्यको परिकल्पना हो । ठीक दूरदृष्टिले जीवनलाई निश्चित दिशा प्रदान गर्छ, लक्ष्यतर्फ अघि बढ्ने हौसला दिइरहन्छ । साथै कठिन समयमा समस्यासित सामना गर्न उत्प्रेरित गरिरहन्छ ।
ठीक बुझाइ भन्नाले जुन क्षेत्रमा हामीले दूरदृष्टि बनाउँछौं, त्यस क्षेत्रलाई राम्रोसित बुझ्नुपर्छ भन्ने हो । साथै आफ्नै व्यक्तिगत प्रकृति र रुझानको पनि बुझाइ हुनुपर्छ । राम्ररी नबुझीकन राखेको दूरदृष्टि र लक्ष्यले हामीलाई सफल बनाउँदैन । कथंकदाचित सफल भइहाल्यौं भने पनि खुशी नहुन पनि सक्छौं ।
यस आलेखमा यी तीनै अर्थमा सम्यक दृष्टिको जीवनमा व्यावहारिक प्रयोजनको लागि छोटो विवेचना गरिन्छ । सम्यक दृष्टिको आध्यात्मिक अर्थ त अर्कै छ — संसारलाई अनित्य, दुःख र अनात्म भनेर देख्नु । अनित्य, दुःख, अनात्म अत्यन्त गहन दार्शनिक विषय हुन् जुन बुझ्न गहिरो चिन्तन र भावना चाहिन्छ । लेखको अन्त्यमा थोरै आध्यात्मिक अर्थ पनि बुझाउने यत्न गर्छु ।
पहिलो अर्थ : Right View (ठीक दृष्टि वा हेराइ)
जीवनमा दुःख त छ नै । तर त्यो दुःखलाई बढाउने वा घटाउने काम हाम्रो दृष्टिले गर्छ । ठीक दृष्टिले भएको दुःखलाई बुझेर घटाउनेतिर लाग्छ । तर गलत दृष्टि लिएको मनले नभएको दुःख अझै दशौं गुणा थप्ने काम गर्छ ।
अहिले सकारात्मक सोच (पोजिटिभ थिङ्किङ) को धेरै प्रचार भइरहेको छ । निश्चय पनि नकारात्मकभन्दा सकारात्मक सोच राम्रो हो । तर जबरजस्ती गरिएको सकारात्मक सोच पनि धेरै दिन टिक्दैन । वास्तवमा मानिसको सोच बुद्धिमत्तापूर्ण (इन्टेलिजेन्ट) हुनुपर्छ । जीवनमा उही सुखी बन्छ जसको दृष्टि यथार्थपरक (रियालिस्टिक) र बुद्धिमत्तापूर्ण छ । बुद्धिमत्तापूर्ण मानिसको सकारात्मक प्रवृत्ति (पोजिटिभ एटिच्यूड) रहन्छ । सकारात्मक सोचभन्दा सकारात्मक प्रवृत्ति हुनु बढी महत्त्वपूर्ण छ ।
यहाँ केही अयथार्थपरक मानसिक प्रवृत्तिको उदाहरण दिन्छु । जस्तो कि हाम्रो मनले हरदम सुखै मात्र चाहन्छ, दुःख अलिकति पनि नहोस् भन्ने चाहन्छ । सुख र दुःख त एउटै सिक्काका दुइटा पाटा हुन् । हामीले हातमा भएको एउटा सिक्काको एउटा पाटो आफूसित राख्नचाह्यौं र अर्को पाटो फाल्नचाह्यौं भने त्यो सम्भव होला ? सुख र दुःख सँगसँगै नै हिँडिरहेका हुन्छन् ।
संसारमा कुनै पनि कुरा एकांगी सम्भव छैन । हामीले बुझ्नुपर्ने मुख्य कुरा यो हो कि ‘जीवनमा हरेक कुरा एकमुष्ठ (प्याकेजमा) आउँछ’ । जसै हामी जन्म्यौं, सुख र दुःख दुवै पनि संगै जन्मे । हामीले जागीर खायौं भने त्यो जागीरमा भएका राम्रा र नराम्रा पक्ष दुवै एकैसाथ आउँछ । हामीले रोज्ने पेशा पनि त्यस्तै हो । जीवन साथी राज्यौं भने पनि ऊसँगै राम्रा र नराम्रा दुवै पक्षसँगै आउँछन् ।
सुखलाई हामी स्वीकार्छौं भने दुःखलाई मात्र नकार्न सकिंदैन । यति मात्रै हो कि कहिले सुखको पाटो माथि पर्छ त कहिले दुःखको पाटो । आफूलाई परेको कुनै दुःखप्रति द्वैष पाल्दा आफ्नै मन बेचैन भइरहन्छ । त्यसैले बुद्धिमानहरू दुःखलाई एउटा अप्रिय यथार्थको रूपमा स्वीकारेर सो दुःख घटाउने वा हटाउने दीर्घकालीन योजना र उपायतिर लाग्छन् ।
अर्को विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने हाम्रो मनले चाहेजस्तो हामीलाई सुखैसुख मात्र भयो भने हामी झनै ठूलो दुःखमा पर्नसक्छौं । मेरी आमा भन्ने गर्छिन् — ‘दुःख भएकाले सुख खोज्छन् । सुख भएकाले दुःख खोज्छन् ।’ सबैतिरबाट सुखी भएकालाई कसैले दुःख दिनुपर्दैन, उनीहरू आफैंले दुःख निम्त्याउँछन् । हामीले सबै किसिमले परिपूर्ण भएका शक्तिशाली तथा धनाढ्यका छोराछोरी देखेका छौं, जो आफ्नै करतूतले दुःख पाइरहेका हुन्छन् । वास्तवमा दुःखमय परिस्थितिसित लड्दा लड्दै नै त हाम्रो बुद्धि र मानसिक क्षमता विकासको हुने हो ।
दोश्रो कुरा, विगतमा भएका कुरालाई सम्झेर पनि हाम्रो मन दुःखित भइरहेको हुन्छ । विगतमा यस्तो भइदिएको भए हुन्थ्यो वा त्यस्तो नभइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने सोचले हामीलाई बित्थैमा तनाव दिइरहेको हुन्छ । विगतबाट शिक्षा लिनु एउटा कुरा हो, तर विगतलाई कोट्याएर मन कुँडाइरहनु अर्कै कुरा हो । वैज्ञानिकहरूले हालसम्म समय–यन्त्र (टाइम मेशीन) बनाएका छैनन् । समय–यन्त्र बनेको भए त विगतमा गएर भएका खराबी सच्याएर फेरि वर्तमानमा फर्किन सकिने हो । जब त्यस्तो गर्नु सम्भव छैन भन्ने कुरा हामीलाई थाहै छ भने विगतमा भएका खराबीलाई बारम्बार सम्झेर बस्नुको कुनै अर्थ छैन । जीवन सँधै अघि बढ्छ । त्यसैले अघि बढ्न चाहनेले विगतलाई सरापेर बस्दैन ।
हाम्रो मनमा अनेकौं अनावश्यक र अयथार्थपरक, काल्पनिक र विद्वैषपूर्ण कुराहरू खेलिरहेका हुन्छन् । यिनले हाम्रो मानसिक चैन खोस्नेभन्दा अर्को काम गर्दैन । बीबीसीले केही वर्षअघि गरेको मनोवैज्ञानिक अनुसन्धानले के नतीजा देखाएको छ भने तनाव, बैचैनी आदि मानसिक समस्याको सबभन्दा ठूला दुइ कारण हुन् — मनमा नकारात्मक कुरा खेलाइरहनु र आफ्नैप्रति मनमनै गुनासो गरिरहनु ।
अर्को मनोवैज्ञानिक अनुसन्धानले के देखाएको छ भने मानिसको मनको स्वभाव नै यस्तो छ कि त्यसले सुख थोरै दुःख धेरै महसूस गर्छ । उदाहरणको लागि, तपाईंले एकहजार रूपैंया भेट्टाउनुभयो भने तपाईं केही खुशी हुनुहुनेछ, तर तपाईंले एकहजार रूपैंया हराउनुभयो भने तपाईं धेरै गुणा बढी दुःखी हुनुहुनेछ । जीवनमा हामी आफूले नपाएका वा कमजोर पक्षलाई लिएर बढी बिलौना गर्छौं । तर आफूसित भएका राम्रा कुराहरू र सबल पक्षलाई नजरअन्दाज गर्छौं । ठीक हेराइ भनेको आफूसित भएका राम्रा कुराहरूमा ध्यान दिँदै तिनैलाई उपयोग गर्दै सुख र सफलतातिर अघि बढ्नु हो ।
दोश्रो अर्थ :Right Vision(ठीक दूरदृष्टि)
हेलेन केलरको नाम धेरैले सुनेको हुनुपर्छ । शिशु अवस्थामै उनले दृष्टि र श्रवणशक्ति गुमाएकी थिइन् । अर्थात् उनी बहुअपांगता भएकी महिला भएर हुर्किन् । तर उनले धेरै पढिन् । अपांगता भएका र महिलाको अधिकारमा उल्लेख्य काम गरिन् । पुस्तकहरू लेखिन् । राजनीतिमा योगदान दिइन् । आँखा नदेख्ने, कान नसुन्ने उनको संघर्ष र सफलताको कथाका धेरै उत्प्रेरक पुस्तक लेखिए, चलचित्र बनाइए ।
उनलाई देखेर एकजना मानिसले एक्कासी भन्यो, “अहो, तपाईं आँखा देख्नुहुन्न । तपाईंलाई बाँच्न धेरै गाह्रो हुँदो हो ।” उनले जवाफमा भनिन्, “मसँग आँखा छैन, तर मसित दूरदृष्टि (भिजन) छ ।” सोही दूरदृष्टिले उनले त्यस्ता महान् कार्यहरू गरिन्, जुन हामीजस्ता आँखा भएका लाखौं मानिसले गर्नसकेनन् । अनि यसैबाट उनको कहावत प्रसिद्ध भयो, “अन्धो हुनुभन्दा पनि खराब कुरा हो—जीवनमा कुनै दूरदृष्टि (भिजन) नहुनु ।” (The only thing worse than being blind is having sight but no vision.)
दूरदृष्टि जति परको राख्यो त्यति नै शक्तिशाली हुन्छ । उदाहरणको लागि कुनै लक्ष्य नभएको विद्यार्थीभन्दा परीक्षामा उच्च ग्रेड ल्याउने लक्ष्य राखेको विद्यार्थी बढी उत्प्रेरित हुन्छ । उच्च ग्रेड मात्र ल्याउने लक्ष्य राखेको विद्यार्थीभन्दा विद्यार्थी जीवनपछि कुन क्षेत्रमा लाग्ने भन्ने स्पष्ट लक्ष्य भएको विद्यार्थी बढी उत्पे्ररित हुन्छ । पैसा कमाउन मात्र पेशामा लागेका पेशाकर्मीभन्दा आफ्नो पेशाबाट सेवा पुर्‍याउने उदेश्य लिएको व्यक्ति बढी उत्प्रेरित र आफ्नो पेशामा खुशी रहन्छ । महान नेताहरू त आफ्नो जीवनकालको मात्र होइन, सैयौं वर्षपछिसम्मन्को जगत कल्याणको दूरदृष्टि राखेर अघि बढ्छन् । त्यसैले उनीहरूले जस्तै दुःख पनि सहन सक्छन् । तुरन्तै लक्ष्य प्राप्त नभए पनि अधीर हुँदैनन् । गौतम बुद्धले बोधिसत्व हुँदै ‘प्राणी मात्रलाई दुःख–मुक्तिको उपाय सुझाउने’ दूरदृष्टि राखेका थिए । त्यसैले त २६०० वर्षपछि पनि मानिसहरू उनको पछि लागेका छन् ।
दोश्रो अर्थ : Right Understanding(ठीक बुझाइ)
लक्ष्य राख्नु राम्रो हो, तर धेरै मानिसले लहलहैमा लक्ष्य राखेका हुन्छन् । कसैले डाक्टर बन्ने इच्छा राख्नुको कारण डाक्टरले पाउने मानसम्मान वा कमाइ हुनसक्छ । यी बाहिरी आकर्षणहरू हुन् । यथार्थ यो हुन्छ कि जब ऊ डाक्टर बन्छ, तब उसले पाउँछ कि कसैले खासै सम्मान पनि गर्दैन र कमाइ गर्न पनि सजिलो छैन । यस्तै धेरै युवाहरू संगीत, अभिनय, मोडलिंग आदि क्षेत्रमा आकर्षित हुन्छन् । तर त्यो भित्री चाहना नभएर बाहिरी झिलिमिलीको आकर्षण मात्र पनि हुनसक्छ । त्यसैले नेतृत्व विकासका प्रशिक्षक जोन म्याक्सवेलले प्रख्यात पुस्तक नै लेखे — ‘पुट योर ड्रीम इन्टु टेष्ट’ । हामीले आफ्नो सपनालाई पनि जाँचेर हेर्नुपर्छ ।
जीवन दोहोरो यात्रा हो — आन्तरिक र बाहिरी । आन्तरिक भनेको आफ्नोबारे बुझाइ हो — आफ्ना भित्री रुझान र खुबीहरू । आफ्ना रुझान र खुबी अनुसारको लक्ष्य रोज्यो भने खुशी हुनसकिन्छ । त्यसैले पहिला आफ्नो प्रकृति र रुझानबारे थाहा पाउनुपर्छ ।
लक्ष्यसम्म सफलतापूर्वक पुग्न चाहनेले लक्ष्यसम्म पुर्‍याउने मार्गबारे पनि जानकारी हासिल गर्नुपर्छ । मानौं कि कसैले सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्ने इच्छा राख्यो । तब ऊ तुरन्तै सगरमाथातिर लम्किँदैन । पहिला उसले हिमालयको बारे, त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो अनि मौसम आदिको जानकारी लिन्छ, बाटोको नक्शा केलाउँछ । तालिम लिन्छ, तयारी थाल्छ । राम्रा, रमाइलाको साथै अप्ठेरा र जोखिमपूर्ण पक्षको पनि पूरै जानकार बन्छ । ठीक बुझाइ भनेको सम्पूर्ण बुझाइ हो । आफ्नो लक्ष्य र दूरदृष्टिको लागि कुनै क्षेत्र रोज्नअघि त्यसका सकारात्मक पक्ष मात्र नभएर नकारात्मक पक्ष पनि पूरै बुझ्नुपर्छ । यदि दूरदृष्टि भित्रैबाट आएको हो भने त्यस क्षेत्रका दुःख र कठिनाइ पनि खुशीसाथ सामना गर्ने क्षमता हुन्छ । सकिँदैन जस्तो लाग्छ भने हामीले आफूलाई मिल्दो कुनै अर्कै क्षेत्र रोज्नुपर्छ ।
अझै बुझ्नुपर्ने मुख्य कुरा हो — दूरदृष्टि भनेको लक्ष्य मात्रै पनि होइन । जस्तो कि डाक्टर बन्ने एउटा लक्ष्य हुनसक्छ । लक्ष्यसँगै ध्येय (मिसन) हुनुपर्छ । डाक्टर बन्नु लक्ष्य हो भने ध्येय हुनसक्छ— ‘म मानिसको पीडा कम गर्न सहायक बन्छु’ । अनि दूरदृष्टि हुनसक्छ— ‘स्वस्थ संसारको निर्माण’ । तब डाक्टरी एउटा कमाउने पेशा मात्र नभएर अभिरुचि (प्यासन) बन्छ । अभिरुचिले खुशी दिन्छ र जीवनभर त्यस क्षेत्रमा धेरैभन्दा धेरै योगदान दिने प्ररणा दिन्छ । दूरदृष्टिले विकल्पहरू पनि दिन्छ । भनौं, आर्थिक वा अरू नै कुनै कारणले डाक्टर बन्नसकेन भने पनि अन्य तरीकाले पनि स्वस्थ संसारको निर्माणमा जुट्नसकिन्छ । डाक्टर बन्न सकेन भनेर निराश भइहाल्नुपर्ने हुँदैन । ‘स्वस्थ संसारको निर्माण’को लागि धेरै पेशागत क्षेत्रबाट योगदान दिनसकिन्छ, जस्तै पोषण, जीवरसायनशास्त्र, सूक्ष्मजीवविज्ञान, मनोविज्ञान वा सामाजिक अभियान । डाक्टर पढ्न सम्भव भएन भन्दैमा दूरदृष्टिबाट पछि हट्नुपर्छ भन्ने केही छैन । यो पनि हुनसक्छ कि संसारलाई तपाईंको खाँचो डाक्टरको रूपमा भन्दा अन्य रूपमा बढी छ ।
आध्यात्मिक अर्थमा सम्यक दृष्टि
गौतम बुद्धले संसारका तीनवटा स्वभाव बताएका छन् । यसलाई बौद्ध दर्शनमा ‘त्रिलक्षण’ भनिन्छ । ती हुन् — अनित्य, दुःख र अनात्म ।
अनित्य : संसार अनित्य छ भन्ने कुरा त हामी सहजै अनुभव गर्नसक्छौं । हिजो फक्रेका सुन्दर फूल आज सुकिसकेका हुन्छन् । त्यस्तै हामी पनि निरन्तर परिवर्तन भइरहका हुन्छौं । मृत्यु त सबैका लागि एक मात्र अन्तिम सत्य हो ।
दुःख : दुःख–सत्यको विषय त पहिलो लेखमै नै लेखिसकेको छु । (लेखको लिंक राख्ने ।) जन्म हुनु नै दुःख हो । भोक–प्यास दुःख हुन् । तिनलाई मेट्दा क्षणिक सुखको अनुभव त हुन्छ । तर वास्तवमा त्यो सुख त दुःखकै जगमा उभिएको छ !
अनात्म : ‘म छु’ भन्ने जुन भावना हामीभित्र हुन्छ, त्यो नै दुःखको आध्यात्मिक कारण हो । हामी सबैले सतत ‘म’को अनुभव गर्छौं । तर बुद्ध भन्छन् ‘म’को अनुभव नै भ्रम हो, अज्ञान हो । त्यसैले बुद्धको दर्शनलाई ‘अनात्मवादी’ दर्शन भनिन्छ । संज्ञान, स्नायुविज्ञान आदि क्षेत्रमा काम गर्ने अहिलेका वैज्ञानिकहरू पनि यसै निचोड नजिकमा पुगेका छन् । उनीहरूले धेरै खोज्दा पनि हाम्रो दिमागभित्र कतै पनि ‘म’ अनुभव गर्ने केन्द्र भेट्टाउन सकेनन् । बरु उनीहरूले पाएका छन्, समानान्तर रूपमा चल्ने दिमाग वा मनका स्वतन्त्र भागहरूको खुकुलो सञ्जालको अचेतन क्रियाहरूको परिणाम हो — ‘म’ को अनुभव । ‘म’को अनुभव दिमागको एक स्थानबाट अर्को स्थानमा निरन्तर परिवर्तन भइहन्छ । तर हामीलाई नित्यजस्तो मिथ्याभास हुन्छ । यो वैज्ञानिक निष्कर्ष बौद्धदर्शनले व्याख्या गर्ने ‘आत्मभाव’, जुन हामीले अज्ञानतावश महसूस गरिरहेका हुन्छौं, को नजिक छ ।
(आर. मानन्धर दर्शनशास्त्रमा अध्येता हुन् । बाल्यकालमा उनी पाँच वर्ष बौद्ध विद्यार्थी भई थाइल्याण्डमा अध्ययन गरेका थिए । हाल उनी नेतृत्वसीप, व्यवस्थापन र माइन्डफुलनेशका प्रशिक्षक हुन् । उनले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा व्यवस्थापनको उच्च पदमा दुइ दशक बिताइसकेका छन् ।)
भिक्षुका लागि रेलमा सिट आरक्षण गरिएको देश श्रीलंका
चार आर्यसत्य र आर्य अष्टांगिक मार्ग